Uche gi dikwa anyi | Martech Zone
Sunday, Eprel 20, 2008 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Kemgbe izu ole na ole gara aga, m na-atụtụ ma na-edowe akwụkwọ - otu n’ime ha bụ The Big Switch, site na Nicholas Carr. Taa, agụchara m akwụkwọ ahụ.
Nicholas Carr rụrụ ọmarịcha ọrụ n'ịrụpụta myirịta dị n'etiti mmalite nke ike eletrik na mba a na ọmụmụ igwe ojii. Na ederede yiri nke a, Wired nwere nnukwu edemede, a na-akpọ Planet Amazon, na mbipụta ya nke May 2008 nke na-akọ akụkọ igwe ojii Amazon. Jide n'aka na ịlele ya. Wired zoro aka na onyinye Amazon dika Akụrụngwa dika Ọrụ (HaaS). A makwaara ya dị ka Akụrụngwa dịka Ọrụ (IaaS).
Ọ bụ ezie na m na-eto nghọta Nicholas banyere igwe ojii na-eme n'ọdịnihu na ọdịnihu nke 'kedu' anyị ga - esi zụlite n'ọdịnihu dị nso, ụjọ tụrụ m mgbe ọ malitere ikwu maka ihe a na - apụghị izere ezere akara kọmputa ga - enwe anyị karịa ka anyị gara n’ijikọta ha - ọbụlagodi. Akwụkwọ ahụ ewezuga ọrụ ndị ahịa na-arụ ugbu a na itinye data - ma ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụjọ na-atụ ebe ebe nke a nwere ike ịdị n'ọdịnihu.
Oge ọ bụla anyị gụrụ ibe ederede ma ọ bụ pịa njikọ ma ọ bụ lelee vidiyo, oge ọ bụla anyị tinyere ihe na ụgbọ ibu azụmahịa ma ọ bụ mee nyocha, oge ọ bụla anyị zigara email ma ọ bụ nkata na windo izi ozi ozugbo, anyị na-ejuputa n'ụdị “ihe ndekọ ahụ.” … Anyi anaghi amachakarị ihe na eri anyi na agba gburugburu na otu esi eme ha. Ọbụna ma ọ bụrụ na anyị maara na a na-enyocha ma ọ bụ na-achịkwa, anyị nwere ike ọ gaghị eche. E kwuwerị, anyị na-eritekwa uru na nzizi nke Intanet na-eme ka o kwe omume — ọ na-eme ka anyị zuo oke ahịa na ndị ọrụ. Anyị na-anabata njikwa ka ukwuu na nloghachi maka mma dị ukwuu. A na-eme ududo ududo ka anyị tụọ, anyị enweghị obi ụtọ n'ime ya.
Mgbochi na akara bụ okwu siri ike nke m enweghị ike ikwenye. Ọ bụrụ na m nwere ike iji data ndị ahịa mee ihe iji nwalee ma buo amụma ihe ha nwere ike chọọ, anaghị m achịkwa ha ma ọ bụ megharịa ha anya n'ịzụrụ. Kama, na nkwụghachi maka ịnye data ahụ, achọrọ m ịnye ha ihe ha nwere ike na-achọ. Nke ahụ na-arụ ọrụ nke ọma maka akụkụ niile metụtara.
Njikwa ga-egosi na interface ahụ ejirila aka m merie nnwere onwe m ịhọrọ, nke bụ nkwupụta mkpari. Anyị niile bụ zombies na-enweghị uche na Intaneti nke na-enweghị ikike ichebe onwe anyị megide mgbasa ozi ederede edebere nke ọma? N'ezie? Ọ bụ ya mere mgbasa ozi kachasị mma ka na-enweta naanị ọnụọgụ ọnụọgụ pịa-site na ọnụego.
Banyere ọdịnihu nke mmadụ na igwe na-ejikọ ọnụ, enwere m nchekwube maka ohere ndị ahụ. Chegodi inwe ike inweta igwe nyocha n’enweghị mkpa keyboard na njikọ Internetntanetị. Ọrịa mamịrị ga - enwe ike ma nyochaa ogo shuga shuga ha ma chọpụta ụdị nri kacha mma iji rie nri. Na nri? Ikekwe ị nwere ike nyochaa nri caloric gị kwa ụbọchị ma ọ bụ gụọ isi Weight Watcher ka ị na-eri nri.
Nke bụ́ eziokwu bụ na anyị enweghị ike ịchịkwa onwe anyị, anyị echegbula onwe anyị AI. Anyị nwere ụwa na ahụ ike akụ nke agụụ na-agụ ha, mmega akụ na-eyi si na nkwonkwo ha, riri ahụ na-agha ụgha, na-aghọ aghụghọ na-ezu ohi iji nweta ha fix… wdg Anyị na-ezughị okè igwe onwe anyị, mgbe niile na-agbalị imeziwanye ma na-ada ada.
Ikike ịsefe iji keyboard na nyochaa na 'nkwụnye' na isn'tntanetị abụghị echiche na-atụ m ụjọ ma ọlị. Enwere m ike ịghọta nke ahụ akara bụ okwu a na-eji aghara aghara na, na ụmụ mmadụ, ọ dịghị mgbe ọ bụ eziokwu. Anyị enwebeghị ike ijide onwe anyị - igwe mmadụ agaghị enwe ike imeri igwe zuru oke nke Chineke n'onwe ya chịkọtara.
Nnukwu mgbanwe ahụ bụ ezigbo ọgụgụ ma m ga-agba onye ọ bụla ume ka ọ bulie ya. Echere m na ajụjụ ndị ọ na-ewelite na ọgụgụ isi nke ọdịnihu dị mma, mana Nicholas na-ele ohere anya kachasị egwu karịa echiche olile anya banyere ihe ọ ga-eme maka mmekọrịta mmadụ na ibe ya, ịmịpụta ihe yana ogo ndụ.
Tags: kalendaịgbagha echichemmepụta ihenjikwa ihe omumeihe omume n'elu ikpo okwukalenda googledị egwupaireti mmiri
A na m agafe akwụkwọ Nick .. ruo ugbu a ọ na-atọ ụtọ ịgụ akwụkwọ - enwere m olileanya na ọ ga-anọ otu ahụ.
Nicholas yiri ka ọ bụ onye ọrụ rogue na ụwa teknụzụ, mana ọ na-amasị m ịgụ ma blọọgụ ya ma enwere m mmasị na akwụkwọ a. N'oge na-adịbeghị anya, enwere m mmasị na akwụkwọ akụkọ ihe mere eme karịa ndị ọzọ - na Nicholas nyere ụfọdụ nghọta dị ukwuu banyere mgbanwe nke mmepụta ume na myirịta na mgbakọ.
Nke ahụ bụ akụkụ kacha amasị m na akwụkwọ ahụ, echere m na myirịta ya dabara adaba. Otú ọ dị, mgbe ọ gafere nke ahụ, ihe nwetara ntakịrị ihe ọjọọ. Ọ bụghị na ozi ahụ abụghị ihe anyị kwesịrị ichegbu onwe anyị - naanị na echere m na ọ leghaara ohere dị egwu anya.
Nwee anụrị ịgụ ya - enweghị ike ichere ịhụ ihe ị na-eme na ya!
Daalụ maka nghọta. Ekwenyere m na usoro ụjọ ahụ nwere ike ree akwụkwọ
nye ndị na-agụ akwụkwọ novice, mana nke bụ eziokwu bụ na kọmputa na-eji ngwa agha
data ... emela na agaghị "jikwaa ụwa".. CrAzy!!!
Ịre ahịa ruo ọtụtụ afọ ma ghara ịtụ egwu PC m!